Wararka Maanta: Sabti, Jan 12, 2013-Tartan kubada cagta ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobollka Hiiraan
Tartanka oo socday mudo lix cisho ah ayaa lugtii ugu danbeeysay waxaa shalay ku kulmay kooxaha kubadda cagta Kooshin iyo Howl-wadaag oo soo bandhigay cayaar farsamadeedu sareysay taasoo 90-kii daqiiqo ee loogu talagalay ku soo dhamaatay 1-0 oo ay guusha ku raacay kooxda kubada cagta Kooshin.
Mas’uuliyiinta maamulka gobollka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti oo ka mid ahaa boqolaal dadweyne ah oo goob joog u ahaa daawashada cayaarta ayaa markii ay soo idlaatay waxaa ay guda galeen bixinta abaalmarinada kooxihii ka qeyb-galay tartanka.
Tartanka oo ay ka qeyb-qaateen afarta kooxood ee kala ah Kooshin, Xaawo Taako, Howl-wadaag iyo Buundo-weyn, ayaa lagu kala saarayay dhibco, taasoo keentay in kaalinta labad ay tartanka ka galaan kooxda kubada cagta Xaawo Taako oo dhinaca dhibacaha ka sareysay kooxda Howl-wadaag.
Kooxda kaalinta koowaad ku soo baxday ee Kooshin ayaa la gudoonsiiyay koobkii guusha iyo lacag dhan $ 500 doolar, halka kooxda Xaawo Taako oo ku soo baxday kaalinta labaad ee lagu abaalmariyay lacag dhan $ 400 oo doolar, waxaa ay sidoo kale kooxda abaal-marin u heshay cayaartooyigii ugu wanaagsanaa dhinaca Gool dhalinta oo la siiyay $ 100 doolar, iyo Goolyahihii ugu khaatarsanaa intii uu tartanku socday oo noqday goolyaha isla kooxda Xaawo Taako oo la siiyay lacag dhan $ 100 doolar.
Sidoo kale, kooxda Howl-wadaag oo ku soo baxday kaalinta sadaxaad ayaa la la gudoonsiiyay abaalmarin lacageed oo dhan $ 500 oo doolar, halka mid ka mid ah isla cayaartooyda kooxda loo aqoosaday cayaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday oo la siiyay lacag dhan $ 100 doolar.
Kooxda Buundo-weyn ayaa heshay abaalmarin lacageed oo dhan $ 300 oo doolar oo lagu gudoonsiiyay sida laga sheegay garoonka kooxdii ugu cayaarta wanaagsaneyd mudadii uu tartanku socday.
Guddoomiyaha gobollka Hiiraan C/fitaax Xassan Afrax oo ka hadllay goobta ayaa sheegay in ay dhiiri-galinayaan tartamada noocan oo kale ah, isaga oo uga mahad celiyay guddiga Olambikada gobollka sida ay ugu howlan yihiin hormarinta Sprotiga gobollka.
Col Cismaan Dubad taliyaha ciidamada Jabuuti ee magaalada Baladweyne ayaa sheegay in ay xoogga saarayaan juhdiga ugu badanna ku bixin doonaan sidii ay dhalinta gobollka ugu dhiiri-galin lahaayeen cayaaraha oo qeyb ka qaata ayuu yiri is dhax-galka bulshada iyo soo celinta nabad-galyada.
Tartanka oo ahaa kii ugu xiisaha iyo xamaasada badnaa oo sanadihii ugu danbeeyay soo mara gobollka ayaa marka laga soo tago dadweyihii nasiibka u hellay in ay daawadaan cayaartii shalay waxaa dadka u sahashay in ay si toos ah ula socdaan habka ay cayaartu u soctay iyo bixinta abaalmarinada Idaacada Radio Baladweyne oo ah Idaacad FM-ah kuna hadasha afka dowladda Soomaaliya.
Dhinaca maali-galinta waxaa tartanka gacan ka siisay hay’adda DRC, halka ciidamada Jabuuti ay dayactireen garoonka oo bur bursanaa 22-kii sano ee la soo dhaafay.